निर्वाचनले अर्थतन्त्रलाई चलायनमान बनाएको छ - Karobar National Economic Daily
निर्वाचनले अर्थतन्त्रलाई चलायनमान बनाएको छ
query_builderSeptember 5, 2017 2:43 PM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility1006
निर्वाचन आयोगले प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । असोज २ गते हुने निर्वाचनका लागि कर्मचारीसँगै मतपत्र पनि मतदान केन्द्रमा पुगिसकेको आयोगले जनाएको छ । यस निर्वाचनका लागि आयोगले ३० लाख मतपत्र छपाइ गरेको छ ।
१ महानगरपालिका, ३ उपमहानगरपालिका, ७३ नगरपालिका, ५९ गाउँपालिका गरी १ सय ३६ स्थानीय तहका लागि हुने निर्वाचनबाट ६ हजार प्रतिनिधि छानिँदै छन् । प्रदेश नं. २ का आठ जिल्लामा हुने निर्वाचनमा २६ लाख ६४ हजार ९ सय ५० मतदाता सहभागी हुँदै छन् ।
निर्वाचन तालिकाअनुसार भदौ २१ गते उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यक्रम छ । प्रदेश नं. २ को निर्वाचनमा ४५ दल सहभागी हुँदै छन् । ६८ लहरको लामो मतपत्र प्रयोग गरिने आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए । उम्मेदवारको मनोनयन हुने दिन जम्मा तीन दिन बाँकी रहँदा प्रमुख दलहरू उम्मेदवार छान्ने चटारोमा छन् ।
प्रदेश नं. २ को निर्वाचनलाई मुख्य दलहरूले आफ्नो प्रतिष्ठाको लडाइँ बनाएकाले सबैको ध्यान खिच्न पुगेको छ । यद्यपि निर्वाचनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने भएकाले राजनीतिक दल, नागरिक समाज, जनप्रतिनिधिले विकासलाई प्रमुख मुद्दा बनाउनुपर्नेमा मधेसलाई नजिकबाट नियालिरहेका अर्थविद्हरूको जोड छ ।
मुलुकको विकास आर्थिक समृद्धिबाट मात्रै सम्भव भएको भन्दै उनीहरू जनप्रतिनिधिले अधिकार, कर्तव्यलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने र नागरिक समाजलगायतले दलीय स्वार्थ नहेरी खबरदारी गर्नुपर्ने र विकासबाटै जनतालाई निकास दिनुपर्ने बताउँछन् । दुई सातापछि हुन लागेको निर्वाचनको सन्दर्भ पारेर स्थानीय समस्या समाधान र निर्वाचन अर्थतन्त्रबारेमा मधेससँग विशेष चासो राख्ने अर्थविद्हरूसँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार ः
हाम्रो होइन, राम्रो व्यक्ति चुनौं
डा. भोगेन्द्र झा
निर्वाचन हुनु भनेको लोकतन्त्र सुशासनका लागि अपरिहार्य हो । यसले रजनीतिक परिवर्तनसँगै सामाजिक–आर्थिक विकासमा पनि ठूलो टेवा दिन्छ र मुलुक समृद्धितर्फ पाइला टेक्छ भन्ने आमबुझाइ पनि हो, जुन प्रकारको आशा र विश्वास हो, त्यही अनुसार जनप्रतिनिधिले काम गर्न नसक्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता छ । यसअघि वर्षौंदेखिका राजनीतिक उपलब्धिहरू संस्थागत गर्न बाँकी छ भने आर्थिक समृद्धितर्फ उन्मुख हुनु जरुरी छ ।
किनकि स्थानीय तहमा राजनीतिका नाममा हुने गैरराजनीतिक गतिविधिले नागरिकले राष्ट्रिय राजनीतिबाटै उपचार खोजिरहेका छन् । त्यसको बन्दोबस्त गर्न पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई निकै चुनौती छ भने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन अर्को चुनौती छ ।
अहिले देखिएका गतिविधिबाट जनता आजित भइसकेका छन् । निर्वाचनबाट हामीले चाहेको आर्थिक समृद्धि नै हो । तराई क्षेत्र कृषिको उर्वर भूमि मानिन्छ । कृषिमै पनि दिगो विकास हुन सकेको छैन, उत्पादन रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना गर्नु पनि जनप्रतिनिधिको दायित्व हो । अहिलेसम्म देखिएका राजनीतिले आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउन सकिरहेको छैन । विकासका लागि निर्वाचन कोसेढुंगा पनि हो । निर्वाचनले सुशासनको माध्यमबाटै विकासले पाइला चाल्छ र भ्रष्टाचार निरुत्साहित हुन्छ ।
जनप्रतिनिधिले धेरै कुरामा अलमल नभईकन विकासका अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ र जनतालाई विकासबाटै निकास दिन सक्नुपर्छ । यसका अतिरित्त आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका कुरालाई विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ ।
अहिले निर्वाचनको माहौल हेर्दा दलहरूले निहित स्वार्थमा लागेर राम्रो भन्दा हाम्रो उम्मेदवार भन्दै हिँडेका छन्, स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलीय झन्डा बोकेर हिँड्नुभन्दा स्थानीय तहमा विकास गर्न सक्ने र जनताका चाहनालाई निकास दिन सक्ने खालको व्यक्तित्व चयन गर्नु जरुरी देख्छु म ।
यसअघि प्रदेश नम्बर २ बाहेकका अन्य प्रदेशमा निर्वाचन भइसकेको छ, तर जनप्रतिनिधिले काम गर्न सकेनन् भन्ने कुरा बाहिर आउन थालिसकेका छन्, त्यसले पनि जनप्रतिनिधिले विकासका एजेन्डा जस्तो पर्यटन पूर्वाधार, सडक सञ्जाललगायतलाई ध्यान दिनुपर्छ । निर्वाचित भए पनि आफूले के गर्ने भन्ने अधिकार र कर्तव्यका कुरामा पनि ध्यान दिन सके केही राम्रा काम हुन सक्छन् ।
अहिले निर्वाचनका नाममा जे–जस्ता गतिविधि भइरहेका छन्; जात, पैसा, मसलका कुरा छन्; शक्तिकेन्द्रका कुरा छन्, ती सबै छाडेर स्थानीय तहको विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । निर्वाचन आफैंमा लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो, तर राम्रो र योग्य व्यक्ति चुन्न सकिएन भने भोलिका दिनमा पनि जनताको आशा, भरोसा र समृद्धि हासिल हुन सक्दैन । कानुनी राज्यको स्थापना गर्नु जनप्रतिनिधिको प्रमुख दायित्व पनि हो ।
आर्थिक गतिविधि बढाउछ
निर्वाचनले निम्त्याउने चुनौती भनेको निर्वाचन अर्थमुखी हुँदै जानु हो । अर्थमुखी भन्नुको अर्थ निर्वाचन व्यवसायका रूपमा परिणत हुन लागेको छ । जनता र नेताबीच व्यावसायिक सम्बन्ध हुन थालेको छ । व्यवसायको उद्देश्य नाफा प्राप्त गर्नु हुन्छ, तर राजनीतिक निकायका लागि जनप्रतिनिधि छनोट गर्ने विषय सामाजिक सेवाअन्तर्गतको विषय हो ।
सामाजिक सेवा भनेको गैरनाफामूलक हुनुपर्छ । तर, विगतका चुनावमा भएको खर्च गर्ने प्रवृत्तिले यसलाई व्यावसायिकतासँग जोडेर लगेको देखाएको छ । यसले समग्र राजनीतिलाई नै आघात पार्नेछ । व्यवसायको उद्देश्यले हुने चुनावमा नेता र जनता दुवैको उद्देश्य एउटै भएर गएको छ । उम्मेदवारले निर्वाचनमा लगाएको लगानी असुल्ने उद्देश्यले काम गर्छन् ।
उनीहरूले जनताको काम सेवामुखी नभएर अर्थमुखी भएर काम गर्न थाल्छन् । यसले विकासका विषयहरू ओझेलमा पुग्छ । उनीहरूले नीतिगत क्रियाकलापको दुरुपयोग गर्छन् । यसमा हुने खर्चले अर्थतन्त्रलाई खासै प्रभाव पार्दैन । अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव भनेको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गरिने लगानीबाट हुने गर्छ ।
अर्को विषय पारदर्शी ढंगबाट गरिने लगानीले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्छ । यस्तो विषय निर्वाचनमा हुने खर्चबाट हुने गर्दैन । निर्वाचनमा हुने खर्च कालोधनबाट गर्ने गरिन्छ । कालोधन वा अवैध धनबाट गरिने खर्चले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामा डो¥याउन सक्दैन । अहिले त निर्वाचनमा कालोधनको प्रयोग ओपन सिक्रेटजस्तै भएको छ ।
सबैलाई थाहा छ, उम्मेदवारहरूले निर्वाचनमा गर्ने खर्चको विवरण गलत बुझाउँछन् । खर्च धेरै गर्छन् र विवरण थोरै बुझाउँछन् । यसलाई रोक्नका लागि निर्वाचन आयोगले निर्माण गरेको आचारसंहितालाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
तत्कालै निर्वाचनमा कालोधनको प्रयोगमा कमी आउँछ भन्ने त होइन, तर यसका लागि दलीय संयन्त्र बनाएर यसलाई निरुत्साहित पार्ने नीति तथा योजनालाई अगाडि बढाउनुपर्छ । निर्वाचनमा हुने कालोधनको प्रयोग वा धेरै खर्च गरेर थोरै दर्साउने प्रवृत्तिलाई रोक्न यस्तो कठोर प्रयास गरिए कम्तीमा चार–पाँचवटा निर्वाचनसम्म पर्खनुपर्ने हुन्छ । तर, यसका लागि पहल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कालोधनको प्रयोग निर्वाचनमा बढी हुने भएको र यो अनुत्पादक खर्च हुने गरेकाले यसले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्दैन । उम्मेदवारहरूले कार्यकर्ता र जनतामा गर्ने खर्चबाट स्फीति (इन्फलेसन) बढाउँछ । साथै यसले समाजमा (क्रिमनाइलेजन इन सोसाइटी) अपराधीकरणको प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्छ र मनिलन्ड्रिङको समस्यालाई जटिल पार्छ ।
निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले गर्ने मुनाफामुखी लगानीले गर्दा विकासका कार्यमा ओझेल त पर्ने होइन भन्ने विषयमा सचेत जनता सजग हुनुपर्नेछ । उनीहरूले उम्मेदवारका घोषणापत्रमा उल्लेख विकासका मुद्दाहरूलाई सामाजिक लेखापरीक्षणको माध्यमबाट पूरा गर्ने दबाब सिर्जना गरिरहनुपर्छ ।
जनताले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेअनुसारका प्रतिबद्धता पूरा गर्न गर्ने निरन्तरको दबाबले निर्वाचनमा हुने गलत प्रवृत्ति कमजोर हुन सक्छ । यसबाट सामाजिक सेवाको सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने परिपाटीलाई विकास गर्न मद्दत गर्न सक्छ । सामान्य अवस्थामा निर्वाचनबाट केही आर्थिक गतिविधि बढ्न सक्छ ।
निर्वाचनबाटै समृद्धि सम्भव छ
डा. सुरेन्द्रलाल कर्ण
सामान्य अवस्थामा भन्दा निर्वाचनको बेला पैसा बढी चलायमान हुन्छ । पैसाको चलखेल बढी हुन्छ, यद्यपि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । बजारमा उपभोग्य सामानहरू बढी खपत हुन्छन्, साथसाथै निर्वाचनसँगै जनतामा एक खालको उत्साह–उमंग देखिएको हुन्छ ।
निर्वाचन भनेको दसैंजस्तै हो, साँच्चिकै दसैंको मुखमै निर्वाचन हँुदै छ । यस्तो बेला खासै स्रोतको उल्लेख गर्न नपर्ने हुँदा अनौपचारिक अर्थतन्त्रले पनि विशेष ठाउँ पाउँछ । यो एउटा सकारात्मक पाटो हो भने अर्कातिर निर्वाचनका नाममा धेरै मोटो रकम खर्च गर्ने, विलासी जीवनयापन गर्ने, खानपानमा रमाउने जस्ता कुरा पनि छन् । सबै कुरालाई नियाल्दा निर्वाचन र अर्थतन्त्र एक–आपसमा अन्तरसम्बन्धित पनि छन् ।
तर, यतिबेला बाढीले तराई डुबानमा परेको, बालीनाली नष्ट भएको, नागरिक घरबारविहीन भएको अवस्था पनि छ । यो संवेदनशील अवस्थामा पनि निर्वाचन हँुदै छ । यसले ती बाढीपीडितको मुखमा मल्हम लगाउन पनि सघाउ पुग्ने विश्वास मैले गरेको छु । तराई क्षेत्र भनेको कृषि र उत्पादनको उर्वर भूमि हो । त्यसमा यो प्रदेश नम्बर २ नमूना नै हो भन्दा हुन्छ ।
यहाँँका जनताले समृद्धि चाहेका छन् । अहिलेसम्म राजनीतिक मुद्दा प्रखर बनेको छ । आर्थिक मुद्दा ओझेलमा परेका छन् । हामीले अहिलेसम्म राजनीतिक कुरा ग¥यौं, अब आर्थिक समृद्धिको कुरा उठाउने बेला भएको छ ।
समृद्धिबिना जनता खुसी हुन सक्दैनन् । त्यसैले अब चुनिएर आउने जनप्रतिनिधिले यस कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ । अर्को कुरा प्रदेश नं. २ बाहेक सबै क्षेत्रमा निर्वाचन भइसकेको छ । त्यहाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अहिलेसम्म राम्रोसँग काम गर्न नसकेको अवस्था छ । यसका लागि सरकार भनौं, राजनीतिक दल भनौं या जनप्रतिनिधिहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
जनताले पनि कस्ता खालका प्रतिनिधि चुन्दा विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हेक्का राख्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो । यसका लागि निर्वाचन आयोगले दलिय घोषणापत्र हेरेर अनुगमनलाई तीव्रता दिनुपर्छ भने चुनिएर आउने जनप्रतिनिधिले पनि आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारबारे सचेत हुन सके भने जनताले चाहेको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सहज हुन्छ ।
यसका लागि दलहरू, जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनता सबै जिम्मेवार हुनु जरुरी छ । यसका लागि यति बेला उपर्युक्त वातावरण बनेको छ, निर्वाचनबाटै आर्थिक समृद्धि सम्भव छ ।
सेयर बजारलाई सकारात्मक संकेत दिन्छ
डा. सुरेन्द्रकुमार झा
आन्दोलनरत सबै राजनीतिक दलको सहभागितामा हुन लागेको प्रदेश नम्बर २ को स्थानीयलगायत आसन्न चुनावबाट देशमा राजनीतिक स्थायित्वको बाटो बलियो हुन लागेको सन्देश प्रसारित हुन्छ । निर्वाचनमा हुने अर्थतन्त्रलाई ‘मनि फ्लो इकोनोमी’ (धन प्रवाहित हुने अर्थतन्त्र) का रूपमा लिइन्छ । पहिले प्रदेश नम्बर २ मा हुन लागेको चुनाव भनेको कोर मधेसमा हुन लागेको चुनाव हो ।
यहाँ पछिल्लो समय आन्दोलनको तनाव थियो । यो तनावलाई विस्थापित गर्न हुन लागेको चुनावबाट स्थानीय जनतामा एक किसिमको स्थायित्वको बोध हुन सक्छ । यसले आर्थिक गतिविधिमा संलग्नहरू माझ सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छ । मधेसका आठ जिल्लालाई आर्थिक क्षेत्र (इकोनोमिक जोन) का रूपमा पनि लिइन्छ । आन्दोलनले गर्दा यहाँको अस्थिरतामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई निर्वाचनले केही टेवा पु¥याउँछ ।
निर्वाचनमा राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारहरूले खर्च गर्छन् । यसबाट उपभोक्तामा आधारित अर्थतन्त्र (कन्ज्युम्र्स बेस्ड इकोनोमी) लाई गतिशीलता प्रदान गर्छ ।निर्वाचनपछिको अवस्थामा निर्वाचनको खर्चले यो अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गर्छ । विकसित देशहरूको कुरो गर्ने हो भने निर्वाचनपछि त्यहाँको सेयर बजारलाई तीव्र बनाउँछ ।
तर, नेपालको सन्दर्भमा सेयर बजार उदार अर्थतन्त्रको जस्तो छैन । यहाँ नियन्त्रित अर्थतन्त्र (कन्ट्रोल्ड इकोनोमी) को अवस्था छ । त्यसैले विकसित मुलुकमा निर्वाचनपछि हुने सेयर बजारमा देखिने प्रभाव देखिनेछैन । तर, नेपालको सेयर बजारको सन्दर्भमा निर्वाचनले ‘गुड नोसन’ सकारात्मक संकेत भने दिन्छ ।
पोभर्टी बिलो लाइन (गरिबीको रेखामुनि) बसेका जनतामा निर्वाचनले सकारात्मक सन्देश दिन सक्छ । बाढीले आक्रान्त, आन्दोलनको चापमा पीडित जनतामा यसले औसत खुसियाली (ग्रस ह्याप्पिनेस) प्रदान गर्छ । राजनीतिक दलका नेताहरू र उम्मेदवारहरू निर्वाचनको क्रममा गरिबीको रेखामुनि बसेका जनताको घरदैलामा जान्छन् । सुखदुःखका कुरा हुन्छ ।
भोजभतेर हुन्छ । सपनाका कुरा हुन्छन् । यसबाट निराश जनतामा व्याप्त निराशालाई निर्वाचनले विस्थापित गरेर उनीहरूलाई नयाँ सपना बुन्न प्रेरित गर्छ । सामाजिक मनोविज्ञानमा यसले सकारात्मक प्रभाव पारी समस्या समाधान गर्न नयाँ–नयाँ सोचबारे बहस प्रारम्भ गर्न लगाउँछ ।
बाढीले प्रभावित मधेसको अवस्थाले समग्र अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धिबारे गरिएको पूर्वानुमान पूरा हुन सक्ने देखिँदैन । नेपालको अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र हो । आठ जिल्लामा गएको बाढीले प्रभावित गरेको कृषिक्षेत्रले गर्दा एसियाली विकास बैंकले गरेको ५.४६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि पूरा हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । यसका लागि मधेसको कृषिक्षेत्रको हानिले प्रभाव पार्छ ।
कृषि उत्पादनले नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई प्रभाव पार्ने गरेको तथ्य लुकेको भने छैन । यस्तो अवस्थामा सामाजिक मनोविज्ञानलाई निर्वाचनले केही सकारात्मक दिशामा डो¥याउन सके पनि समग्र अर्थतन्त्रमा यसले प्रभाव पार्दैन । यसका लागि निर्वाचनपछि यस क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधिलाई तीव्रता प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर, जतिसुकै आर्थिक गतिविधिलाई वृद्धि गरे पनि समग्र आर्थिक वृद्धिको अवस्था ३.७५ देखि ४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र हुन सक्ने मेरो अनुमान छ ।
अर्थतन्त्र निर्वाचन आयोग स्थानीय तह निर्वाचन